IXiaomi Mi Band 4 yayiza kufika eYurophu ngoJuni 18 | I-Androidsis
IXiaomi Mi Band 4 sele inomhla wokumiliselwa eYurophu
I-11 kaJuni ndiya e thaca ngokusesikweni iXiaomi Mi Band 4, njengoko iqinisekisiwe kutshanje. Esi sele sisisizukulwana sesine seentsimbi zorhwebo lwaseTshayina, eziyimpumelelo kwintengiso. Kwesi sizukulwana sitsha, inkampani yazisa ngothotho lweenguqu kuyo. Enye yezinto ezintsha ezinqabileyo ngumbala wombala, umfanekiso wabo wokuqala siwubonile kule veki.
Kancinci kancinci sele sinedatha eyoneleyo kwinto esi sacholo siza kusishiya. Elinye lamathandabuzo kukuba umhla wokukhutshwa kwalo uza kuba nini. Nangona idatha entsha sele isishiyile Umhla wokukhutshwa kwale Xiaomi Mi Band 4 eYurophu. Ukulinda kuya kufutshane.
Ukusukela ngokwedatha entsha, IXiaomi Mi Band 4 izokwaziswa ngoJuni 18 eYurophu. Ke emva kweveki emva kokunikezelwa kwayo siya kuba nakho ukuyithenga kwilizwekazi laseYurophu. Ngokuqinisekileyo ungathenga zombini kwiivenkile zorhwebo lwaseTshayina nakwi-Intanethi.
Ngelo xesha Lo ngumhla ekutyhilwe ngawo ukuba uyakukhutshwa e-Itali. Nangona kunokwenzeka ukuba iza kufika eSpain ngalo mhla, kuba olu hlobo lokumiliselwa luhlala lwenzeka kwangolo suku kwiimarike ezininzi. Okanye alikho ixesha elininzi ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye.
IXiaomi Mi Band 4 iya kuba yeyona bracelet ibiza kakhulu ukuba uphawu lwaseTshayina lubonisile ukuza kuthi ga ngoku. Ukusetyenziswa kwescreen esikhulu, esinombala we-OLED kuya kuba noxanduva loku kunyuka kwamaxabiso. Nangona ixabiso lihlala lingaphantsi kwezinye iindlela, ezinje ngeSamsung yeGalaxy Fit, ekwafumaneka eSpain.
Ngethamsanqa, ngalo Lwesibini siza kuphelisa ukuthandabuza ngayo. Ke le Xiaomi Mi Band 4 iya kuziswa Kwaye siya kuyazi yonke into uphawu lwaseTshayina esilungiselele yona malunga noku, nesi sizukulwana sitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi Band 4 sele inomhla wokumiliselwa eYurophu
I-LG Stylo 5 ibonwa ngaphambi kokumiselwa ngokusesikweni
Iindlela ezizezinye ezilungileyo zeWhatsApp ye-Android